Igumbi eliphindwe kabini elijonge iigadi. - I-Airbnb
Igumbi eliphindwe kabini elijonge iigadi.
Marqués de Comillas, Chiapas, Mexico
Igumbi lakho lokulala e indlu esehlathini okanye ezintabeni sinombuki zindwendwe onguLas Guacamayas
Wamkelekile kwi-adventure! kwaye ujabulele ubungangamsha kunye neemfihlo zendalo kunye neMontes Azules Biosphere Reserve kwaye uphile ngamava angenakulibaleka, ukusuka kukuphumla kwamagumbi eLas Guacamayas Ecotourism Centre kunye negalelo kwiiprojekthi zethu zolondolozo.
Siyihotele ye-eco kunye nemisebenzi enikezelwe kulondolozo lwe-scarlet macaw (Ara macao cyanoptera) kwindawo yayo yendalo.
Sinikezela ngesidlo sakusasa esipheleleyo, isidlo sasemini, isidlo sangokuhlwa (asifakwanga)
I-Las Guacamayas Ecotourism Centre inika abakhenkethi bayo amagumbi atofotofo ukuba bayonwabele ngokupheleleyo ukuzola kunye nomlingo wendalo entliziyweni yeMontes Azules Biosphere, CHIAPAS.
Eli gumbi likwindlwana enamagumbi amabini ahlukeneyo. Igumbi lakho lineebhedi ezi-2 eziphindwe kabini, igumbi lokuhlambela labucala, amanzi ashushu kunye nabo bonke obutofotofo. Ikwanayo nefeni kwaye igumbi lilodwa ngokupheleleyo lineminatha yeengcongconi. Ligumbi elisemgangathweni.
Ngaphandle, unethala lakho elinee-hammocks kunye nezihlalo zengalo apho unokuphumla khona, ucamngce ngezitiya zethu zendalo okanye ufunde ngoxolo kunye nokuba wedwa ngelixa usonwabela impepho.
Iikhabhinethi zethu zibekwe phantsi kwaye ziqhagamshelwe kwiindawo zokutyela kunye neendawo zokuhlala ngeebhulorho zamaplanga.
Sikwindawo yesithintelo seMontes Azules Biosphere Reserve, indawo yokusabela ehlathini eMexico kunye nommandla ongenakuthelekiswa nanto: 331,000 yeehektare ezigqunywe ngamahlathi amade ahlala eluhlaza.
Umbuki zindwendwe ngu- Las Guacamayas
Siyihotele eco-ihotele enabasebenzi abasebenzisanayo, ngoko ke siya kuba nakho ukuba ufuna uncedo.